Calaamada Tawreedka ee Nabiga - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Nabi Muuse (NNKH) iyo Walaalkiis Haruun (NNKH) ayaa horseed u ahaa reer binu Israa’iil muddo dhan 40 sanno. Waxay qoreen ammarradii iyo waxay oogeen allabariyo. Waxay soo qoreen kuwan calaaamaadkan badan ee Tawreedka ah. Mar dhow waa waqtigii labadan nin ay dhiman lahaayeen. Ina keena aynu dib u eegnee qaabka ka soo baxay Tawreedku ka hor inta aan tixgelin aynu is toos ah u eegno Tawreedka.
Eegidda Nidaamka ee Tawreedka
Sidaas aawadeed waa maxay tilmaamaha Calaamadaha ka yimid Tawreedka ?
Waa in aan aragnaa muhiimadda iyo sida soo noqnoqashada allabariyaddu ay yihiin. Ka feker kuwan soo socda waxaan eegnay:
Haabiil bixiyey allabari aad xaq u leedahay. Haabiil baa samaayey allabarigii loo baahnaa; Qaabiil allabari qudaar ah. Allabarigaasi lama aqbalin.
Kadib daadkii Nuux (NNKH) allabari ahaan u bixiyey.
Ibraahim (NNKH) allabari u bixiyey ka dib markii uu soo gaaray Dhulkii Ballanqaadka
Ibraahim (NNKH) bixiyey wankii sida allabari kadib imtixaankii wiilkiisa dabadeed. Markaas, muddo ka dib, wuxuu shaaca ka qaaday in isla goobtaas ‘la siin doonaa’
Reer binu Israa’iil oo dhammu waxay allabaryo ku bixin Kormaridda. Tani waxay iyagii ka badbaadisay dhimashadii iyo sidoo kale Yuhuudda oo weli u dabaaldega maalintaas Iiddii Kormaridda la mid ah sanad kasta
Haaruun (NNKH) ugu bixiyay allabari oo ka mid ah laba orgi sanad kasta, waayo, reer binu Israa’iil, ka dib bixinaya allabarigii inuu nafsaddiisa
Qaalin baa lagu allabaryey si dambaska ka nadiifisaan lahaa ka dhigaa waxyaalaha nijaasta ah ee meyd ah
Allabaryaddan oo dhan waa in aad u sameysaan xayawaanka daahirka ah- Midkood oo ido ah, ariga ama dibi. Waxay ahaayeen dhamaantood lab marka laga reebo qaalinta.
Allabaryaddan oo dadkuna ay sameeyaan wax wanaagsan si ay wixii xumaa ay galeen u yidhaahdaa waa ka xunahay kuwaasoo bixiyey allabari. Taas macnaheedu waxa weeye in ay ahaayeen dedis si ay dembi iyo ceeb uu qofka siinaya allabariga qariyeen. Tani waxay la bilaamatay Aadan kaasoo helay naxariista Ilaah qaab harag ah. Hargahani waxay u baahan yihiin dhimashada xoolaha (Allabari kale!) halka uu cawradiisa daboolayo. su’aal muhiim ah inaad weydiiso waa: Maxaad allabaryadda aanan mar dambe la siinin ama loo bixiyen? Waan arki doonaa jawaabta ka dib.
Erayga “xaqnimo” si joogto ah dib-u-soo muuqatay. Waxaan ku aragnay markii hore Aadan markii Ilaah isaga u sheegay in ‘dharka xaqnimadda uu ahaa kan ugu fiican’. Waxaan taa ku aragnay Ibraahim baa lagu ‘tixgalinayaa’ xaqnimadda markii uu u doortay inuu rumaysto ballanqaadkii wiilkii soo socday. Reer binu Israa’iil wuxuu falaa xaqnimo haddii uu heli karo xajista Ammarradiisa – Laakiin waxay lahaayeen si ay u iyaga si buuxa u dhawraan – waqtiga oo dhan.
Qiyaamaha ee Tawreedka
Waxaan sidoo kale aan aragnay qaabkii ay ku guul darreysatay inay xajistaan ammarradiisa ay keentay in Qiyaame xaga Ilaah ka yimaado. Tani waxaa bilaabay Aadan, kuwaasoo lahaa oo kaliya in ay ku Caasiyaan mar uun si ay u helaan xukunka. Qiyaamaha had iyo jeer ay keento dhimashada. Dhimashada waxayn ahayd mid ku saabsan qofka la xukumay ama xoolaha lagu allabaryi jiray. Ka feker kuwan soo socda ee aan ka baranay:
Iyadoo Aadan, xoolaha ku allabaryi hargo dhintay.
Iyada oo Haabiil – Xayawaanka ee allabarigiisa aqbalay oo dhintay.
Iyadoo Nuux, dadku waa ku dhinteen fatahaadii iyada oo xataa uu Nuux, oo daadkii ka dambaysay, iyadoo la siinayo allabari, ahayd in uu dhiman xayawaan.
Iyada oo Luudh, dadkii Sodom iyo Gomora ku dhintay Qiyaamahii – Iyo sidoo kale naagtiisa.
Iyada oo allabarigii ina Ibraahim, wiilka ayaa dhiman lahaa, laakiin wanka ayaa halkiisii dhintay.
Iyada oo Kormaridda sidoo kale wiilkiisa curadka ah (Waayo, Fircoon iyo kuwii gaaloobay ee kale) dhintay ama wanka oo dhiiggooda lagu xardhay albaabada ku dhintay.
Iyada oo Ammarrada Sharciyadda, sidoo kale qofka eed aawadeed u dhintay ama orgiga mid dhintay Maalinta Kafaaraggudka.
Waa maxay micnaha qaabkan oo dhan? Waan arki doonaa sida aan ku sii arki doono. Laakiinse haatan Muuse iyo Haaruun (NNKH) baa soo gabagabeyn doona Tawreedka. Laakiin waxay ay farriimo muhiim ah si toos ah uga heleen Ilaah labo fariimood, labadaas arrimood oo eegay mustaqbalka oo inoo leh maanta Muhiimad qaar ah – Nabiga soo socda iyo Habaarka soo socda & Barakooyinka soo socda. Waxaan eegi doonaa Nabiga halkan.
Nabiga Soo Socda
Marka Ilaah siiyey Looxa Buurta Mount Sinai Oo isna sidaasuu yeelay oo soo bandhigay awoodda iyo haybad. Tawreedka ayaa qeexaya goobta wax yar ka hor intaa aan la siinin Alwaaxdii
16 Oo maalintii saddexaad, markuu waagii beryay, waxaa dhacay onkod iyo hillaac, oo daruur qaro weyn baa buurtii soo dul joogsatay, oo waxaa yeedhay buun codkiisu aad iyo aad u weyn yahay, kolkaasay dadkii xerada ku jiray oo dhammu wada gariireen. 17 Markaasaa Muuse dadkii xeradii ka soo bixiyey inay Ilaah la kulmaan aawadeed; kolkaasay waxay istaageen buurta salkeedii. 18 Oo Buur Siinay dhammaanteed way qiiqaysay, maxaa yeelay, Rabbi baa dusheeda ku soo degay, isagoo dab ku dhex jira, oo qiiqeediina kor buu u baxay sida qiiq foorno oo kale, oo buurtii oo dhammuna aad bay u gariirtay. (Baxniintii 19:16-18)
Dadku aad bayna u baqeen. Tawreedka ayaa iyaga u qeexayaa sidan
18 Oo dadkii oo dhammuna way wada arkeen onkodkii iyo hillaacii, iyo codkii buunka, iyo buurtii qiiqaysay; oo markii dadkii arkay ayay gariireen, oo meel fog istaageen. 19 Kolkaasay waxay Muuse ku yidhaahdeen, Adigu nala hadal, oo annana waannu ku maqli doonnaa, laakiinse Ilaah yuusan nala hadlin, waaba intaasoo aannu dhimannaaye.
Tani waxay dhacay biloowgii ee Muuse (NNKH) 40 sano oo uu hoggaaminayey bulshada. Marka ay dhamaato, Ilaah wuxuu kala hadlay Muuse, (NNKH) xaaladdaha la soo dhaafay, xusuusinaya dadka cabsidooda la soo dhaafay, iyo iyadoo uu samaynayo ballaanqaad la xiriira mustaqbalka. Muuse (NNKH) ku diiwaan geliyey Tawreedka:
15 Oo Rabbiga Ilaahiinna ahu wuxuu dhexdiinna idiinka kicin doonaa nebi sidayda oo kale oo walaalihiinna ka mid ah, oo idinku waa inaad isaga dhegaysataan, 16 sidaad Rabbiga Ilaahiinna ah uga doonayseen maalintii shirka markaad Xoreeb joogteen oo aad tidhaahdeen, Rabbiga Ilaahayaga ah codkiisa yaannan mar dambe maqlin, oo dabkan weynna yaannan mar dambe arkin, si aannan u dhiman. 17 Oo markaas Rabbigu wuxuu igu yidhi, Wixii ay ku hadleen si wanaagsan bay u yidhaahdeen.18 Waxaan iyaga walaalahood uga dhex kicin doonaa nebi sidaada oo kale ah, oo markaasaan afkiisa gelin doonaa erayadayda, oo isna wuxuu iyaga kula hadli doonaa wax alla waxaan isaga ku amri doono oo dhan.19 Oo waxay noqon doontaa in ku alla kii aan maqlin erayadayda uu magacayga ku sheegi doono, isagaan weyddiin doonaa. 20 Laakiinse nebigii wax aanan ku amrin leh oo si kibir ah magacayga ugu hadla, ama kii ilaahyo kale magacood ku hadlaa, nebigaasu waa inuu dhintaa. 21 Oo haddaad qalbigiinna iska tidhaahdaan, Sidee baannu u garanaynaa eraygii aan Rabbigu ku hadlin? 22 Markii nebi ku hadlo magaca Rabbiga, haddii wixii uu ku hadlay ayan ahaan oo ayan noqon, waxaas ayaa ah waxa aanu Rabbigu ku hadlin. Nebigu si kibir ah buu u hadlay ee waa inaydaan ka cabsan innaba.
Sharciga Kunoqoshadiisa 18:15-22
Ilaah wuxuu dadkii ka doonayey in ay ixtiraam caafimaad qaba u fidiyaan markii uu la hadlayo Ammarradii Looxa Oo isna sidaasuu yeelay hab ku keena cabsi weyn dadka dhexdooda. Laakiinse haatan wuxuu doonayaa inuu mustaqbalka oo ballan qaaday in waqti iman doonaa markuu nin nebi ah oo sida Muuse (NNKH) ka mid ah reer binu Israa’iil waa la sara kicin doonaa. Markaas laba tilmaamaha la siiyaa:
1. Ilaah wuxuu isu qaban doonaan dadka ka mas’uul haddii aysan bixin in Nabiga soo socda aysan fiiro gaar ah u yeelan.
2. Habka in ay go’aan ka gaarto in Ilaah lagaga dhex hadlay nebi ah waa in fariinta la saadaalin karo mustaqbalka oo waa in run noqon karto.
Xeerka ugu horeeya ee macnaheedu ma ahayn in ay jiri doonaa nebi ka mid ah oo kaliya ka dib Muuse (NNKH), laakiin in ay jiraan mid ka mid noqon doona kuwa soo socda gaar ahaan waa in aan dhagaysanaa sababtoo ah waxa uu ahaa in ay leeyihiin door gaar ah oo leh ayuu dhambaalkiisa ku salaysan yahay. – waxay noqon lahayd ‘erayadayda’. Maadaama oo uu Ilaah kaliya Isaga qudhiisa ogyahay mustaqbalka – Dhab ahaan ma jiro nin og – Xeerka labaadna wuxuu ahaa hab si ay u caawiyaan dadka in ay si sax ah go’aan looga gaaro haddii fariin dhab ka timid Ilaah ama aysan. Xeerkani iyo Ballanqaadkii Imaatinka Nabiga ayaa hayay filashadooda dadkii reer binu Israa’iil – Aan had iyo jeer si fiican u qaban, laakiin marnaba gebi ahaanba la illoobay. Waxaan u aragnaa in daabacaada soo socda sida Muuse (NNKH) u isticmaalay hanuunkiisa labaad in ay saadaal wanaagsan mustaqbalka ee reer binu Israa’iil in ay barakada iyo inkaarta reer binu Israa’iil Barakada iyo Inkaarta reer binu Israa’iil – Taas oo ah waxa Tawreedku kuu soo ururo.
Laakiinse haatan, waxoogaa fikirka tan ‘Nabiga soo socda’. Kumuu ahaa? Culimada qaarkood ayaa soo jeediyay in kani uu yahay Nebi Maxamed (NNKH). Laakiin ogsoonow in wax sii sheegidda dhigayaan in nebiga noqon lahaa uu “ka mid yahay walaalahooda reer binu Israa’iil”- Sidaas Yuhuudi ah. Sidaas awgeed waxa la tilmaamayaa ma ahan isaga. Culimada kale ayaa la yaabay, haddii ay tani laga yaabaa in ay tilmaamayso Nebi Ciise Masiix (NNKH). Waxa uu ahaa nin Yuhuudi ah oo weliba wuxuu barayay sida amar weyn – Sida haddii erayada Ilaah ahaayeen ‘afkiisa’. Waxaan sii wadi sahaminta Buuggaagta Quduuska ah si aan u doondoono faham dheeraad ah.
Tags:allabari in Tawreedcaddaalad Tawreeddib u eegis ah Tawreedfariin Nebikaasoo 'Nabiga'Nabiga SCWNabiga wuxuu ku TawreedNebiNebi quduuska ahnebiyadii Islaamkanolosha Nebisheeko Nebistory of Nebitawrattawrat of MusaTawreedThe Nabiga Sharciga Kunoqoshadiisaxaqnimadaada Tawreed